तयार भयो स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड,कर्मचारीले रोजेको स्थानीय तहमा जान पाउने
बैशाख ०३, २०७५ रासस
काठमाडौँ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड’ तयार पारेको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४ अनुसार कर्मचारी समायोजन नभएसम्मका लागि निजामतीतर्फका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा कर्मचारीको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने भन्दै मन्त्रालयले सो मापदण्ड तयार पारिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको आन्तरिक संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भए पनि कर्मचारी पठाउनका लागि मापदण्ड तयार पारेको हो ।
मापदण्डअनुसार निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउँदा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दीको आधारमा स्थानीय तहको रिक्त पदमा खटाउने भएको छ ।
प्रवक्ता तामाङले चाँडै नै मापदण्डअनुसार कर्मचारीलाई खटाइने बताउनुभयो । स्थानीय तहमा करीव ५७ हजार कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
प्रकाशित : सोमबार, बैशाख ०३, २०७५२०:५८
मोटरसाइकलमा आएका दुई अज्ञात व्यक्तिले बम राखेर भागे पछी बम विष्फोट!!
तिन महिनादेखि बेपत्ता पुरुषको शव जंगलमा सडेको अवस्थामा भेटियो !
मरेको गैँडा भेटियो !
आफ्नै छोराबुहारीको हत्यामा संलग्न पक्राउ!
झोलुंगे पुलको जिल्ला बागलुङमा चालू आवमा मात्रै ११ झोलुंगे पुलको निर्माण !
मात्रै ११ वर्षका यी बालकले ट्रयाक्टरमा झुन्डिएर आत्महत्या गरे !